Igbo, John: Lesson 111 - Ịbegide obe na ili akwa (Jọn 19:16b-22) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 111 (Crucifixion and the grave clothes; Dividing the garments and casting the lots)
a) Ịbegide obe na ili akwa (Jọn 19:16b-22)
16b ... Ya mere, ha jidere Jisọs wee duru ya pụọ. O we pua, nēbu obe-Ya, rue ebe anākpọ Ebe Okpokoro-isi, nke anākpọ n'asusu Hibru, Gọlgọta, 18 ebe ha kpọgidere Ya n'obe, Ya na ndikom abua ọzọ, n'otù akuku na otù; n'etiti.
Umu agha ndi agha na-aga ịpu ma kpoo ndi ohi abuo, mgbe Pailat nyere ha Jizos dika nke ato "felon". Ndị agha ahụ na-etinye crosses na atọ, n'ihi na onye ọ bụla na-ebu ngwá nke ọnwụ. Kraist agbaghaghi obe, ma okwunyeghi osisi n'uzo. Mmadụ atọ ahụ gafere n'okporo ámá obodo, ruo mgbe, na-agbasi ume ike, ha ruru n'ọnụ ụzọ ámá ọdịda anyanwụ nke ebe ọdịda anyanwụ. Mgbe ahụ, ha rutere n'ugwu a ma ama Golgotha, n'ihi na ọ dị ka okpokoro isi, na-arị elu n'elu mgbidi obodo ahụ. Ndị bi na ya nwere ike ile ndị ikom a mara ikpe anya na-atụkwasị obe n'obe ha.
Jọn ekwughị nkọwa nke obe, akwụkwọ ya na-ajụ idekọ egwu ahụ. Ndị mmadụ ajụla ịhụnanya Chineke, ịkpọasị nke ọkụ wee dakwasị ha. Ha ji obi ọjọọ wezuga Onye amuru site na Mmo Nso, site kwa ná mmehie ha, àjà ah nke achoputara nke Kraist nke kpuchiri mmehie ha. O nweghi iko nke ozo n'osisi nke ihere, ma n'ime omimi nke mmechuihu ya, o kpughepuru ebube ya site n'inwe ndidi na idi onwe onye di nso.
Lee ihe ihere nke Jisos kwesiri ikwusi n'etiti ndi ohi abuo. Ha na-agbagọ, na-ekwutọ ka ha kwụruru.
Onye nwere obi ebere ma di kwa ocha Onye gosip tara onwe ya n'bod nke oge nke nd dika onye akporo ndi mmehie. Ọ bụ n'ihi nke a ka a mụrụ Ọkpara Chineke dịka Nwa nke mmadụ, nke mere na ụmụ nke ụmụ mmadụ ga-aghọ ụmụ ezi omume nke Chineke. Ọ gbadara na omimi nke nhụsianya nke mere na ọ dịghị onye kwesịrị ikwu na Jizọs apụghị ịdaba na ọkwa ya. N'ebe ọ bụla ị nọ ma ọ bụ ezie na i nwere ike ịda, Kraịst nwere ike ịgbaghara mmehie gị ma saa gị ma doo gị nsọ.
19 Pailat we de kwa aha-ya n'akwukwọ, tukwasi ya n'elu obe. E dere, "JIZỌS NAZARET, EZE NDỊ JWỌ." Ya mere ọtụtụ n'ime ndị Juu gụrụ akwụkwọ a, n'ihi na ebe a kpọgidere Jizọs n'obe dị nso n'obodo; ma edere ya n'asusu Hibru, n'asụsụ Latịn, na n'asụsụ Grik.
Ndị agha ahụ kpọgidere Jisos n'agbata ndị omempụ abụọ dịka ihe mgbaàmà nke ịkwa emo maka ihe ọ na-ekwu na ọbụbụeze ya. Pailat dị ugbu a, nọgidere na-akwa emo Council nke ndị Juu nke mere ka ọ mara Jizọs ikpe n'echeghị akọnuche ya. N'elu isi nke Mkpọgidere, Paịlet debere aha na-ebu ebubo ndị Juu.
Chineke jiri aha a n'isi obe nye ndi Juu iwu, n'ihi na Jizos bu eze ha n'ezie. Jizos bu Eze n'ezie, onye naabia n'ezi omume, ihn'anya, umeala n'obi na obi umeala. O guzobere eluigwe n'elu ala. Ndị Juu họọrọ hell, na-ajụ Eze ha Eze na-achụpụ ya n'èzí ọha ha. O wee si otú a ghọọ Eze nke Mba, mana mba dị iche iche nabatara Eze a kpọgidere n'obo taa ma ọ bụ ka ha na-ajụ Onyenwe anyị ịhụnanya ọzọ?
21 Ya mere ndi-isi-nchu-àjà nke ndi-Ju siri Pailat, Edela, Eze ndi-Ju, kama ọ bu Eze ndi-Ju. 22 Ya mere Pailat zara, si, Ihe m'dere , Edewo m ya."
Ndị isi nchụàjà ghọtara ihe nlelị na iyi egwu Paịlet pụtara, kpuchie ya dị ka ọ dị. Ha jụrụ Eze ha ma hụ na ọ na-adịghị ike nke ihe Pailat kwuru. Ha kpọrọ ndị ahụ a kpọgidere asị asị ọbụna karị.
Pailat kwenyesiri ike na aha ahụ dị ka ọchịchọ Siza, nke mere na ọ dere ya n'asụsụ atọ maka ndị nkịtị niile, ndị amaala na ndị ọbịa na-agụ ma ghọta na ọ bụla na-enupụrụ Rom isi ga-enwe otu ihe ahụ. Mgbe afọ 70 AD ndị Juu nupụrụ isi megide ọchịchị Rom, a kpọgidere ọtụtụ puku na obe n'elu mgbidi Jeruselem.
b) Kewaa uwe ma na-efe nza (Jọn 19:23-24)
23 Mgbe ahụ, ndị agha, mgbe ha kpọgidere Jizọs n'osisi, were uwe ya ma kee akụkụ anọ, ka onye agha ọ bụla nwee akụkụ; na uwe. Ugbu a, mkpuchi ahụ enweghị mkpuchi, kpara ya site n'elu n'elu. 24a Ha we sirita ibe-ha, “Ka ayi ghara idọwa ya, ma ayi fere nzà ka ọ mara onye ọ gābu,” ka edeworo n'akwukwọ nsọ, nke nēkwu, si, Ha kewara uwem n'etiti ha. Ha kere nzà m uwe."
Ndị agha anọ ahụ bụ ndị kpogidere Kraịst nwere ikike ịkọ uwe ya. Otú ọ dị, onyeisi ndị agha ahụ adịghị ala ala iji sonye ha n'ọrụ a dị egwu. Ya mere, mmadụ anọ ahụ wepụrụ Jizọs na njedebe nke ihe onwunwe ya napụrụ ya ùgwù. A na-ekpochasị ndị na-akpọ obe na-agbapụ agbapụ iji merie ha.Nkwenye a mere ka a mara ebube Jizọs. Uwe ya na-enweghị atụ yiri nke nnukwu onye nchụàjà. Jizọs n'onwe ya bụ Nnukwu Onye Nchụàjà Chineke bụ onye arịrịọ maka mmadụ niile. N'ihi ọrụ a ọ tara ahụhụ, e mesịkwara ya ahụhụ.
Otu puku afọ gara aga, Mmụọ Nsọ buru amụma banyere nkọwagide nke obe ahụ, nakwa na n'Abụ Ọma nke 22 ebe a na-ekwu, "Ha kewara uwe m n'etiti ha", ihe ndị agha mara. Mmụọ ahụ na-ebu amụma ọzọ, na ha ga-efe nza maka uwe. Mkpụrụ mmụọ ahụ gosipụtara eziokwu nke obe ahụ n'ụzọ ziri ezi, na-ekwupụta na obe Jizọs kpọgidere bụ uche Chineke. Dịka Jizọs kwuru: Ọ dịghị ntutu nke isi gị ga-ada ma Nna gị nke eluigwe amaghị ya. Onye obula kwuru na obe agagh eme ihe obugh nani nagho ezi ihe omuma, ma nemegide Mo nke Chineke bu onye buru amuma ihe omuma a otua puku afo gara aga. Ndị agha ahụ mere omume n'amaghị ama na n'ụzọ na-enweghị nchekasị n'okpuru ụkwụ. Ha bickered n'elu foduru nke ahụhụ. Ha enweghị ọmịiko; ha echetụghị na onye mgbapụta ụwa na-awụsa ọbara ya n'elu obe.
Nwanna, a kpọgidewo gị n'obe Kraịst, n'otu ọnwụ ya? Ka ị na-agbaso akụ na ụba? Ị hụrụ onye ahụ a kpọgidere n'anya n'anya? Ị natara ezi omume nke Chineke na ezi ịdị nsọ site na ọnwụ ya? Ma ọ bụ na ị bụ onye na-ekiri ihe dị elu, na-enweghị nchegbu ka ị na-ekiri na ndị a kpọgburu? Mmụọ Nsọ na-ejikọta anyị na Ọkpara Chineke n'okwukwe, ịhụnanya, na olileanya, ka anyị wee soro na ọnwụ ya, mbilite n'ọnwụ ya, ndụ na ebube ya.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, anyị na-ekele gị maka ịbịaru obe. Anyị na-efe gị maka ndidi, ịhụnanya na ngọzi. Anyị na-eto gị maka mgbaghara nke mmehie anyị na mmehie nke ụwa. I wepụrụ mmehie m mgbe ị na-adabere n'elu osisi nke ihere, ma mee ka ụmụ mmadụ na Chineke dịghachi ná mma. Ị bụ onye mgbapụta na onye arịrịọ anyị.
Gịnị ka aha ahụ e debere n'elu obe ga-apụta?